Gaaliyaam - Wikipedia
Gaaliyaam (ingiriis: Gallium) astaanta (Ga) waa curiye kimiko oo leh tiro atom sodon-iyo-kow ah. Curiyahan oo ka mid ah guruubka 13aad waa bir daciif ah taas oo bir jilicsan, miisaan fudud, midabka naxaasta oo madoow xiga leh isla markaana ah adke kala jabi kara marka heerkulku hooseeyo.
Birta curiyahan Gaaliyaam oo laga helo qolofka dhulka ayaa mar kasta ka mid ah macdan ka sameeysan isku dhisyo kala duwan, sida iskudhiska gaaliyaam(III) oo ah macdan curiyaha Sinki ku jiro, iyo bauxite oo ku jirto curiyayaal badan.
Haddii gacanta lagu hayo wakhti fiican, curiyaha Gaaliyaam way dhalaali sababtoo ah barta dhalaalka curiyahan waa 29.76 °C (85.57 °F) oo kali ah. Tani waxaaba ka sii dhalaalid og iskudhisyada gaaliyaam ka midka tahay, sida jaandiga galinstan (68.5% gaaliyaam, 21.5% indiyaam, iyo 10% tin) taas oo leh bar-dhalaalid aad u hooseysa oo ah −19 °C (−2 °F). Bar-dhalaalidani waa mid ka hooseysa barta biyuhu ku noqdaan adkaha ee 0 °C.
Iskudhisyada Gaaliyaamta waxaa loo isticmaalaa sheeyada Elektarooniga, sida mikrowayfka, infararedhka, iyo furayaasha korontada.
Waxaa laga keenay "https://so.wikipedia.org/w/index.php?title=Gaaliyaam&oldid=142951"
Last edited on 28 May 2015, at 13:17
Boggaan waxaa markii ugu danbeesay wax laga badalay 28 May 2015, marka ee eheed 13:17.